Tencent गेमि Budd बडी विन्डोज १० को लागि डाउनलोड गर्नुहोस् (पछिल्लो संस्करण) - सफ्टवेयर
गेन्डिंग क्रेजीयर भएको छ एन्ड्रोइडको लागि PUBG मोबाइलको सुरुवात पछि। PUBG ले तपाइँको स्मार्टफोनलाई उच्च रिजोलुसनमा र द्रुत गतिमा प्ले गर्न सजिलो बनाएको थियो। तर तपाइँको स्मार्टफोनमा लगातार खेल्दा तपाइँको आँखाहरू चिढचिढिन्छ र तपाइँको दृष्टिलाई कमजोर पार्छ, त्यसैले तपाइँ तपाइँको हुनु पर्छ तपाईंको पीसीमा PUBG विन्डोजको लागि पहिले टेंसेंट गेमि Budd बडी डाउनलोड गरेर।
Tencent गेमि Budd बडी - परिचय
Tencent गेमि Budd बडी पीसी वा ल्यापटपमा एन्ड्रोइड खेलहरू डाउनलोड गर्न सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने इमुलेटरहरू मध्ये एक हो। यो प्राय: PUBG खेल्न डाउनलोड गरिएको छ।
यसले गेमरहरूलाई ठूलो स्क्रिनमा उल्लेखनीय गेमिंग जीवनको अनुभव गर्न प्रदान गर्दछ, विशेष गरी PUBG प्रेमीहरू। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै कन्फिगरेसन सेटिंग्सको साथ सजिलैसँग खेलहरू खेल्न अनुमति दिन्छ। यो PUBG को लागि मात्र होईन तर अन्य धेरै Android खेलहरूको लागि पनि हो।
नि: शुल्क PUBG UC कसरी पाउने?
किन Tencent गेमिंग बडी छनौट?
Tencent गेमि Budd बडी विश्वव्यापी एक उत्तम emulators हो। तिनीहरू अब मुख्य रूपमा PUBG मा फोकस गर्दछ किनकि यो सब भन्दा अग्रणी खेल भएको छ, तर तिनीहरू तपाईंलाई विन्डोजमा अन्य धेरै Android खेलहरू खेल्न अनुमति दिन्छन्।
Tencent गेमि Budd बडि यसको सुविधाहरू, हाइलाइटहरू, र प्रस्तावहरूको कारण लोकप्रिय छ। त्यसैले Tencent छनौट गर्न पहिलो कारण यो हुनुपर्दछ कि तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने खेल खेल्न एक इमुलेटर चाहिन्छ, विन्डोजमा PUBG। यसले पूर्ण हदसम्म रमाईलोको नक्कल गर्दछ।
तपाईं समान सुविधाहरूसँग खेलहरू खेल्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि उच्च रिजोलुसन, ग्राफिक्स, दैनिक पुरस्कार र भ्वाइस च्याट पनि आफ्ना साथीहरूसँग पीसीमा तपाईले यो सबै आफ्नो स्मार्टफोनमा गरिरहनु भएको साथ। सामान्यतया, अन्य इमुलेटरहरूले तपाईंलाई खेलहरू डाउनलोड गर्न दिन्छन् र खेल्न पनि सक्छन्, तर तिनीहरूले लागू गर्न केहि सीमितताहरू पाइसकेका छन्।
तर Tencent गेमि Budd बडी पीसी मा एन्ड्रोइड खेल खेल्न मा कुनै सीमा छैन। यो सबै प्याकेजहरूको साथ आउँदछ। यहाँ खेलेको खेल स्मार्टफोनमा खेल्दा भन्दा उच्च रिजोलुसनमा छ।
यदि हामी Tencent गेमि to बडीलाई अन्य इमुलेटरहरूसँग तुलना गर्छौं भने यो प्रयोग गर्न सजिलो छैन। यसले कुनै प्राविधिक सीप समावेश गर्दैन, त्यसैले सबैजनाले यसलाई चाँडै प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो एक सरल इन्टरफेस छ र बहु ​​विन्यास सेटिंग्स को साथ उपयोगकर्ता को लागी अनुमति दिन्छ।
तपाईं यो उत्कृष्ट इमुलेटर मार्फत आफ्नो खेल अनुभव पनि अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। टेन्सेन्ट गेमि Budd बडीको साथ आउने सब भन्दा उत्तम सुविधाहरू यो हो कि यो धेरै हल्का छ। डाउनलोड गर्दै र Tencent स्थापना गर्नाले प्रणालीको कुनै पनि प्रभाव पार्दैन।
Tencent गेमि Budd बडि द्वारा प्रस्ताव हडताल:
Tencent गेमि Budd बडी एक राम्रो प्रस्तावहरु को लागी प्रयोगकर्ताहरु लाई तपाइँको पीसी मा व्यापक खेल को अनुभव को लागी अनुमति दिन को लागी छ। यो यसको दृष्टिकोणमा बहुमुखी छ। केहि विशेष प्रस्तावहरू निम्नानुसार छन्।
यसले तपाईंलाई गेमप्ले रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
यसले स्ट्रिम गर्न पनि प्रदान गर्दछ; तपाइँले केहि प्रमुख स्ट्रिमिंग वेबसाइटहरूमा तपाइँको गेमप्ले रेकर्डि streamहरू स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक पूर्वनिर्धारित म्यापि system प्रणाली छ कि तपाइँ एक व्यापक खेल को अनुभव को लागी अनुमति दिन्छ।
यसले HD, पूर्ण HD, अल्ट्रा HD जस्ता बिभिन्न स्क्रिन प्रिन्टहरू बीच स्विच गर्न अनुमति दिन्छ।
यो एक फिचर छ तपाइँलाई पूर्ण स्क्रीनमा खेल्न दिनुहोस्। यसले तपाईंको गेमप्लेमा अझ बढी संलग्न हुन मद्दत गर्दछ।
गेमि control नियन्त्रण:
यसले तपाइँलाई तपाइँको गेमप्ले मजा लिने दुबै अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा लिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
कुन कुराले यो सब भन्दा राम्रो बनाउँछ?
यद्यपि त्यहाँ धेरै इमुलेटरहरू छन्, टिन्सेन्ट गेमि Budd बडी यसको प्रस्तावको कारण सबैभन्दा राम्रोको रूपमा दर्जा छ। यो नि: शुल्क हो, र यसले तपाईंलाई तपाईंको कुञ्जीपाटी र माउस मार्फत नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, जुन अनुभव गर्नको लागि एकदम उत्तम चीज हो। यस इमुलेटरको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले कम शक्तिमा निर्बाध रूपमा खेल खेल्न प्रस्ताव गर्दछ।
तर जस्तै पीसी र ल्यापटपमा स्मार्टफोन भन्दा धेरै शक्ति छ, तपाईं ग्राफिक्स र अन्य नियन्त्रणहरूको बृद्धि गरिएको प्रदर्शनको साथ बृद्धि भएको र उल्लेखनीय रमाइलो गेमप्ले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
टेन्सेन्ट गेमि Budd बडी डाउनलोड गर्ने चरणहरू:
Tencent गेमि Budd बडी डाउनलोड गर्न धेरै सजिलो छ। तल केहि र सजिलो चरणहरू छन्:
तपाइँको विन्डोज १० मा प्रयोग गरिरहनु भएको ब्राउजर खोल्नुहोस्।
अब क्लिक गर्नुहोस् लिंक इमुलेटर डाउनलोड गर्न।
लिंकमा क्लिक गरेपछि, एउटा वेब पृष्ठ खुल्नेछ जहाँ तपाईं 'डाउनलोड सुरू गर्नुहोस्' विकल्प देख्नुहुनेछ।
त्यो विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोडको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
Tencent गेमि Budd बडीको बारेमा अर्को शानदार चीज यो हो कि यो प्याकेजमा आएको छ जहाँ प्रोग्रामको स्थापनालाई यसलाई स्थापना गर्न र यसलाई चलाउन कुनै थप सफ्टवेयरको आवाश्यक पर्दैन।
तपाईंले स्थापनाको विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, र बाँकी स्वत: हुन्छ। प्रोग्राम तपाईंको विन्डोजमा स्थापना भएपछि, तपाईंसँग आफ्नो खेल अनुभव निजीकृत गर्न को लागी विकल्प छ।
यसले भ्वाइस च्याट, दैनिक पुरस्कार र अन्य विकल्पहरू जस्ता खेल सुविधाहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ।
निजीकृत गेमप्ले प्रस्ताव गर्दछ।
यसले किबोर्ड र माउस नियन्त्रण समर्थन गर्दछ।
यो नि: शुल्क हो।
यो अत्यधिक स्थिर छ।
यो नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ।
टेन्सेन्ट गेमि Budd बडी सबैभन्दा धेरै मध्ये एक हो लोकप्रिय एमुलेटरहरू तपाईंको पीसीमा एन्ड्रोइड खेलहरू खेल्न र एक व्यापक र बृद्धि भएको खेल अनुभवको मजा लिनुहोस्।
यो मुख्यतया विन्डोजमा खेल्न PUBG मा केन्द्रित हुन्छ, जुन एक Android र IOS खेल हो। २०१UB मा सुरू भएदेखि PUBG सबै भन्दा अग्रणी स्मार्टफोन खेल थियो। तर Tencent गेमि Budd बडीले तपाइँको पीसीको ठूला स्क्रीनहरूमा खेल्न PUBG र विभिन्न अन्य Android खेलहरूको अनुभव लिन सक्षम गर्दछ।
धेरै सुविधाहरूले टेन्सेन्ट गेमि Budd बडीलाई प्रयोग गर्नको लागि उत्तम इमुलेटर बनाउँदछन्। यसले सिमलेस गेमिंग अनुभवलाई अनुमति दिन्छ। तपाईं अझै पनि खेलको सबै सुविधाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा गरिरहनु भएको थियो।
PUBG मा, यसले तपाईंलाई भ्वाइस च्याट गर्न, दैनिक पुरस्कार प्राप्त गर्न, र लगभग सबै अन्य चीजहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा PUBG खेल्दै गर्दा देख्नुहुन्छ।
थप रूपमा, यसले तपाइँका खेल प्लेप्ले रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, जुन केहि लोकप्रिय स्ट्रिमिंग साइटहरूमा स्ट्रिम गर्न सकिन्छ। यो एक हल्का कार्यक्रम छ कि कम पावरमा पनि चल्छ।
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि टेन्सेन्ट गेमि Budd बडीको लागि तपाईंको विन्डोज १० मा तपाईंको सबैभन्दा मनपर्ने एन्ड्रोइड खेलहरूको साथ मिठो र रमाईलो अनुभव लिनको लागि जान्छौं।
पीसी को लागी उत्तम आईओएस इमुलेटर
एप्पल टिभीमा कुनै पनि समय शोटाईम कसरी सक्रिय गर्ने
विन्डोजको लागि imovie जस्तै
नि: शुल्क टिभी कार्यक्रमहरू अनलाइन पूरा एपिसोडहरू स्ट्रिमि watch हेर्नुहोस्
टिभी श्रृंखला नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिमि।
आईफोनको लागि वैकल्पिक संगीत अनुप्रयोग
लुक्स को लागी प्रोमो कोड